Chiclana ရှိအကောင်းဆုံးကမ်းခြေများဖြစ်သော La Barrosa, Playa del Puerco နှင့် Sancti Petri | ခရီးသွားသတင်း
Lola curiel | | စပိန်မြို့ကြီးများ, ကမ်းခြေ
ဖိုနီးရှားတို့ကတည်ထောင်ခဲ့သည် ဘီစီ ၈ ရာစုတွင်ကာဒစ်တောင်ပိုင်းရှိ Chiclana ဟုသတ်မှတ်သည် အသက်အကြီးဆုံးမြို့ကြီးများထဲကတစ်ခုပြည်နယ်၏ s ကို။ ၁၃၀၃ မှာ ဖာနန်ဒို IV သည် Chiclana နယ်မြေများကိုမက်ဒီနာဆဒီဒိုးနီးယားအိမ်သို့ပေးခဲ့သည်အထူးသဖြင့် Alonso Pérez de Guzman သို့နှင့်လက်ရှိမြို့ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ အမေရိကားကိုလိုနီများသယ်ဆောင်လာသည့်မှူးမတ်များနှင့်စန်းကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်ခြင်းသည်၎င်းကိုပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးitsရာမပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။
ယနေ့ Chiclana သည်ရာသီဥတုနှင့်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအတွက်နိုင်ငံတွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာမှကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်အမြောက်အများကိုကြိုဆိုသည် ထိုဒေသ၏သဘာဝကြွယ်ဝမှု။ ထို့အပြင်စည်ပင်သာယာသက်တမ်းသည် ၂၀၃ ကီလိုမီတာအနက်သုံးပုံတစ်ပုံသည်ကာဒစ်ပင်လယ်အော်၏အမျိုးသားဥယျာဉ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ မြို့ပြfromရိယာမှကီလိုမီတာအနည်းငယ်အကွာတွင်၎င်း၏ကမ်းခြေများသည်အဓိကတောင်းဆိုချက်တစ်ခုဖြစ်သည် ပင်လယ်ကမ်းခြေမြို့ခရီးသွား။ ည့်။ Chiclana သဲလုံးပေါ်တွင်သင်၏အားလပ်ရက်များကိုပျော်မွေ့ရန်အခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်မခံစေရန် ဒီနေရာမှာအကောင်းဆုံးကမ်းခြေတွေဖြစ်တဲ့မင်းကိုငါပြောပြမယ်.
1 La Barrosa သဲသောင်ပြင်
2 Puerco သဲသောင်ပြင်
3 Sancti Petri သဲသောင်ပြင်
3.1 Sancti Petri ၏ရဲတိုက်
La Barrosa သဲသောင်ပြင်
မြို့ပြareaရိယာ၌တည်ရှိနေသော်လည်း ဒီကမ်းခြေ၏အရည်အသွေးနှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးခြွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ စင်စစ်တွင်၎င်းသည်ကမ်းခြေနှင့်ဆိပ်ကမ်းများအတွက်သီးခြား Blue Flag ကဲ့သို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များရှိပြီး ISO 14001, နိုင်ငံတကာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုစံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။
Su လွယ်လွယ်ကူကူရယူနိုင်သည် အကျယ်မီတာ ၆၀ ခန့်ရှိသော၎င်း၏ကမ်းရိုးတန်းအနံသည်၎င်းကိုပြုလုပ်သည် သက်သောင့်သက်သာရှိသောကမ်းခြေကိုရှာဖွေနေသောခရီးသွားများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်သန့်ရှင်းသောရေနှင့် Cadiz ကမ်းရိုးတန်း၏သဘာဝအလှအပကိုစွန့်လွှတ်စရာမလိုဘဲကားဖြင့်လည်းကောင်း၊ အမျိုးမျိုးသောအဆောက်အအုံများဖြင့်လည်းကောင်းဆက်သွယ်နိုင်သည်။
La Brosa သည်၎င်း၏ကောင်းသောရွှေသဲပေါ်တွင်အိပ်ရန်အိပ်သော်လည်းပျော်စရာတစ်ခုဖြစ်နေသည် ၎င်းသည်တက်ကြွသောခရီးသွားများအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုရှိသည်။ စာသင်ခန်းများနှင့်အားကစားပစ္စည်းကိရိယာများကိုငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်လှိုင်းနှင့်кайтဆော့ကျောင်းများရှိသည်။ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ပျော်စရာအတွေ့အကြုံကိုခံစားရင်းရှုခင်းလေးကိုကြည်ညိုလေးမြတ်စေမည့်လှုပ်ရှားမှုများကိုလည်းစီစဉ်ပေးသည် မြင်းစီးခြင်းပူဇော်သောမြင်းစီးစင်တာများ ကမ်းခြေတစ်လျှောက်။
သင်ကတည်းခိုခန်းနှင့်ကမ်းခြေဘားတစ်ခုဖြစ်ပါက Mojama သဲသောင်ပြင်သို့မဟုတ် Albarrosa တွင်အအေးအနည်းငယ်သို့မဟုတ်ဘီယာအနည်းငယ်သာရနိုင်သည်။ ထိုနေရာနှစ်ခုလုံးသဲပေါ်တွင်လက်တွေ့ကျကျတည်ရှိပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သောလေထုအပြင်၊ ခမ်းနားထည်ဝါသောမုန့်ညက်။ On သင်အခြား gastronomic ရွေးချယ်စရာများကိုတွေ့လိမ့်မည်လမ်းခရီးနေဝင်ချိန်ကိုကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးသောကြီးမားသောကျန်ကြွင်းသောနေရာများရှိစားသောက်ဆိုင်များ။ မကြိုးစားဘဲမထွက်ပါနှင့် ငါးကြော်, မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ၏ပုံမှန်ပန်းကန်။
Novo Sancti Petri နှင့် Roche မြို့ပြများအကြား အယ်လ် Puerco ကမ်းခြေတိုးချဲ့။ ၎င်း၏အမည်အားမျှော်စင်မှလာသည် ဤကမ်းခြေ၏တောင်စောင်းတွင်တည်ရှိပြီး ၁၆ ရာစုတွင်ဖေလီပေ ၂ ကိုဆောက်လုပ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့သောကမ်းရိုးတန်းစောင့်မျှော်စင်များ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ရောမမှဆင်းသက်လာသောပစ္စည်းများဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည့်ကင်းမျှော်စင်သည်စပိန်လွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲနှင့် ဆက်စပ်၍ ၁၈၁၁ ခုနှစ်နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောစစ်အုံကြွမှုတစ်ခုဖြစ်သည့် Chiclana တိုက်ပွဲကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက် Chiclana သည်တူနာလှုပ်ရှားမှုမြင့်မားသောဒေသတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်တူနာငါးများ၏လမ်းကြောင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ လောလောဆယ် မျှော်စင်သည်၎င်း၏ခြေရင်းတွင်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည်စောင့်ကြည့်သည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်.
Playa del Puerco မှာလည်း နှစ်ဆယ်ရာစုရှိပြည်သူ့အစောင့်စစ်တန်းလျားများကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာစွန့်ပစ်ခဲ့သည့်အဆိုပါအဆောက်အ ဦး ကိုပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီကပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့သည် Azotea အုပ်စုသည် Cuartel del Mar ကိုထိုတွင်ဖွင့်ခဲ့သည်စားသောက်ဆိုင်အသစ်သည်ဤအထူးနေရာကိုကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားအဖြစ်အသုံးချပြီးဖောက်သည်များအားကမ်းလှမ်းသည် အခွင့်ထူးဆုံးနေရာများထဲမှတစ်ခုမယှဉ်နိုင်သောမီနူး theရိယာကနေ
ကမ်းခြေသည် La Barrosa နှင့်အလွန်ဆင်တူသည် ရွှေသဲနှင့်ရှင်းလင်းသောရေအဲဒီမှာရှိပါတယ်ပေမယ့် စိမ်းလန်းသောareasရိယာများ, ခုံနှင့်ကပေးသောကျောက်ကမ်းပါး ပိုပြီးသဘာဝအသှငျအပွငျ နှင့်မြို့ပြဖြစ်ထွန်းမှုများမှအနည်းငယ် ပို၍ သီးခြားထားသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှာဖွေနေသူများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။
Sancti Petri သဲသောင်ပြင်
Es ထိုဒေသရှိလူသိများတဲ့ကမ်းခြေတစ်ခု။ အချို့သောအချိန်များတွင်ဒီရေအလွန်နိမ့်ကျသည့်အခါ La Barrosa မှလမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ Sancti Petri သဲသောင်ပြင် အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲခြားထားသည်, un ပထမ ဦး ဆုံးအပျိုကညာလမ်းပိုင်း မြင့်မားသောဂေဟစနစ်တန်ဖိုးနှင့်အတူ ဒုတိယခြေထောက် အဆိုပါ breakwater မှသည်အဟောင်းမှဆန့် Sancti Petri ၏ငါးဖမ်းရွာ။ ဤမြို့သည်ဤ Chiclana နယ်မြေတွင်ငါးဖမ်းခြင်းနှင့်တူနာထိန်းသိမ်းခြင်းကိုအခြေခံသည့်စစ်မှန်သောစက်မှုလုပ်ငန်းကိုပေါင်းစပ်ခဲ့သောထောင်ချောက်ငါးဖမ်းသူများ၏အခြေချနေထိုင်မှုများကြောင့်တည်ရှိခဲ့သည်။
Sancti Petri သည် ၁၉၇၃ တွင်လက်တွေ့နေထိုင်မှုမရှိခဲ့သော်လည်းလက်ရှိတွင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၌ရှိနေပြီး၊ အကျိုးစီးပွား၏ခရီးသွားအချက် Cadiz ကမ်းခြေကိုလည်ပတ်တဲ့သူတွေအတွက်။ မြို့ထဲတွင်ရှိသောစားသောက်ဆိုင်များသည်ပင်လယ်မှလတ်ဆတ်သောကုန်ပစ္စည်းများကိုကမ်းလှမ်းပြီး၊ Cádiz၏ပုံမှန်အစားအစာကိုခံစားရန်အကောင်းဆုံးနေရာ။ Windsurfing ကျောင်းများ၊ ရွက်လွှင့်ခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည် ရေကြောင်းလှုပ်ရှားမှုများစုစည်း သူတို့သည်သဘာဝသယံဇာတများကြောင့်ဆွဲဆောင်သောဒေသသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်။
Sancti Petri ၏ရဲတိုက်
ကမ်းခြေမှ Sancti Petri ရဲတိုက်ကိုသင်မြင်နိုင်သည်။ San Fernando ၏မြူနီစီပယ်နှင့်ဆိုင်ပြီးဖြစ်သည်။ Chiclana သင်္ကေတ။ ခံတပ်ကိုကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားပြီးထိုနေရာကိုရောက်ရန်သင်ပြုလုပ်ရမည် browsing။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်ဆိပ်ခံတံတားတစ်ခုတည်ဆောက်ထားသည်။ ရှိပါတယ် kayak လေ့လာရေးခရီး ၎င်းသည် Punta del Boquerónမှလည်းကောင်း၊ မြို့နှင့်၎င်းမှထွက်ခွာသည်သူတို့ကကျွန်းကို ဦး တည်သွားတယ်။ ဒါကြောင့်ရဲတိုက်ကိုသွားလည်နိုင်တယ်။
ဆုံလည်သည် ၁၃ ရာစုတွင်ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Benedetto Zacaríasကကာဒစ်ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်စဉ်ကတည်ဆောက်ခဲ့သောရဲတိုက်၏ရှေးအကျဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်း ၁၈ ရာစုတွင်ကြွင်းကျန်များကိုလွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲအတွင်းမဟာဗျူဟာမြောက်စစ်ရေးအချက်အလက်အဖြစ်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးထိုအချိန်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအတွက်အကျဉ်းထောင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » စပိန်မြို့ကြီးများ » Chiclana ရှိအကောင်းဆုံးကမ်းခြေများမှာ - La Barrosa, Playa del Puerco နှင့် Sancti Petri